लकडाउनलाई मगर भाषामा 'मिलाम्ल्हेट' भनिन्छ :- खड्क पामी आले मगर - MONGOL KHABAR
लकडाउनलाई मगर भाषामा 'मिलाम्ल्हेट' भनिन्छ :- खड्क पामी आले मगर
सुचना तथा संचार,
शिक्षक, मगर भाषा लेखक तथा रचनाकार खड्क पामी आलेले मगर ढुटमा लकडाउनको शब्द अर्थ "मिलाम्ल्हेट" कछार मिडिया ब्लगबाट !
लकडाउनको मगर शब्द 'मिलाम्ल्हेट' हुन सक्छ
शव्द भण्डारको लागि मगर भाषा अन्य भाषाको तुलनामा धेरै धनी छन । तापनि नयाँ अविस्कार वा केहि प्राविधिक शव्दहरुको ठ्याक्कै मिनिङ नहुन पनि सक्छ । तर त्यो परिवेश संग मिल्दो जुल्दो कृया प्रतिक्रियाको नाम भने पक्कै चलन चल्तीमा रहेको हुन्छ । मलाई Sanjog laaphaa magar ले 'लकडाउन'को मगर शव्द के हुन सक्छ ? भनेर सोध्नु भएको थियो । -यहाँ मैले 'लकडाउनको' मगर शव्द प्रस्तावित गरेको छु ।
-"मिलाम्ल्हेट" । लकडाउन भनेको नै सिमा रेखा तोकिनु हो । यो क्षेत्रबाट त्यो क्षेत्रमा प्रवेश निशेध भनेको हो । जहाँको ताँहि बस्नु भनेको हो । लकडाउनको सार अर्थ यहिं नै हो । तसर्थ, लकडाउनको मगर शब्द 'मिलाम्ल्हेट' हुन सक्छ ।
किन भने मगर संस्कारमा 'लामल्हेट्के' भन्ने शब्द प्रचलित छन । त्यो लकडाउन हो । यहाँ एउटा प्रसंग जोदौं, कुनै व्यक्तिको मृत्यु भयो, उसलाई घाटमा वा डाँडामा लागेर सतिगती गरिन्छ । त्यस पछि मल्हामी फर्किन्छ । फर्किंदा मल्हामिले बिच बाटोमा राखेको काँढा टेकेर फर्किनु पर्छ । अन्तिमामा जान्नेले त्यो काँढा भन्दा वार, पानीको तीन धर्को धार काटेर फालक्छन । 'अब देखि तिम्रो संसार फरक भयो, तिमी उटै बस । यो सिमा नघेर आउन पाउने छैन' भन्छ्न । यो संस्कारलाई मगर भाषामा 'मिलामल्हेट्च' भन्छ्न ।
त्यस्तै अर्को प्रसंग, बाउ आमाले आफ्नो छोराछोरीलाई छोडेर कतै टाढा जाँदा पनि 'उग्या डुट्मो राहाले' भन्दै बाटोमा स्याउला राखेर त्यस माथी ढुङ्गा चढाइ 'लामल्हेट्के' गर्छन । यि दुबै क्रिया लकडाउन नै हो । त्यसैले मेरो दाबी छ । लकडाउनको मगर शब्द 'मिलाम्ल्हेट' हुन्छ ।
लेखक :- खड्क पामी आले मगर
देवघाट २ जमडाँडा तनहुँ
मिति:२०७७ असार २ गते मंगलबार
Tags # सुचना तथा संचार
सुचना तथा संचार
Labels: सुचना तथा संचार
पश्चिम रुकुम चौरजहारी घटनाको दोषिलाई कार्बाहीको माग गर्दै बुटवलमा बिरोध सभा
जगत ठाडा मगर बुटवल । जेठ १७ शनिबार, रुकुम पश्चिम चौरजहारी घटनामा संलग्नमाथि कारबाहीको माग गर्दै रुपन्देही बुटवलको पुष्पलाल पार्कमा शनिबार...